Hay?adda VSF Germany oo maanta Garoowe ka furtay aqoon is-waydaarsi ku saabsan hormarinta caanaha xoolaha – Radio Daljir
Hay?adda VSF Germany oo maanta Garoowe ka furtay aqoon is-waydaarsi ku saabsan hormarinta caanaha xoolaha
Garowe, May 28- Hay’ahda magaceeda loo soo gaabiyo VSF Germany ayaa degmooyinka Puntland ka billowdey qorshe lagu horumarinayo caanaha xoola dhaqatada Soomaaliyeed. sidaas waxaa maanta warbaahinta u sheegtey madaxa hay’addaas u qaabilsan Soomaaliya Marwo Asiili Barre Diiriye.
Agaasimaha oo hadal ka soo jeedisey tababar ay maanta hay’addu ku qabatey magaalada Garoowe ayaa sheegtey in ay hay’addu waddo qorshayaal lagu xaqijinayo isticmaalka caanaha xoolaha ee Soomaaliya.
Sidoo kale Asiili Barre Diiriye waxaa ay tilmaantay in tababarka maanta ka furmay magaalada Garoowe uu ku salaysanyahay sidii loo helilahaa caano tayo leh oo xannaaneysan, waxaana ka soo qayb-galay dad badan oo kala yimid dhammaan gobollada Puntland.
Tababarkaan ku saabsan horumarinta caanaha ayaan aheyn kii ugu horreeyey oo ay Hay’adda VSF Germany ka fuliso deegaannada Puntland, billowgii sannadkaan 2011 ayay hay’addu tababarro ku saabsanaa horumarinta caana ka fulisey magaalooyinka waawayn ee Puntland. waxaana tababarradaani ay ku soo beegmayaan xilli ay dhibaatooyin kala duwani ka jiraan ka ganacsiga caanaha xoolha gaar ahaan agabka lagu iib-geeyo oo aan ahayn kuwii loogu talagalay.